Galmudug oo kaa shaneyso Ciidanka Dowladda oo qaaday Dagaal ka dhan ah Ahlusunna! | Dayniile.com
Home Warkii Galmudug oo kaa shaneyso Ciidanka Dowladda oo qaaday Dagaal ka dhan ah...
Galmudug oo kaa shaneyso Ciidanka Dowladda oo qaaday Dagaal ka dhan ah Ahlusunna!
“Magaaladda dadku horay ayay uga barakeceen hadana intii hartay ayaa naftooda kala baxsanaya” ayuu Mustaqbal u sheegay mid ka mid ah ganacsatada magaaladda oo diiday in aan xigano magaciisa.
Sikastaba ha ahaate Hadalkaan ayaa imaanaya iyada oo guuldaraysteen dadaalo lagu doonayay in lagu xaliyo khilaafka siyaasadeed ee Galmudug maadaama laba dhinac ay ku adkaysteen shuruudo ay dalbadeen in marka hore la fuliyo.
Previous articleXog: Maxaa Baajiyey Weerarki uu Qoor Qoor ku qaadi lahaa Ahllu Sunna
Next articleTaliyihii Hay’adad Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka u qaabilsanaa degmada Dayniile oo goor dhawayd la dilay.
Madaxweyne Cali Guudlaawe Iyo Jemes Swan Oo Afar Qodob Ka Wada...